Danjireyaasha wadamada shisheeye oo iska fogeeyay in ay faragelinayaan arrimaha doorashada – The Voice of Northeastern Kenya
Danjireyaasha wadamada shisheeye oo iska fogeeyay in ay faragelinayaan arrimaha doorashada
Star FM December 21, 2016
Qaar ka mid ah wadamada shisheeye ayaa iyaga oo ay matalayaan safiiradooda u fadhiyo dalkani Kenya iska fogeeyay in ay balaayin shilin ugu deeqayaan shirakada anan dowliga ahayn si loo farageliyo natiijada ka soo bixi karto doorshada guud.
Bayaan ay si wada jir ah u soo saareen ayay safiiradan ku sheegen in dalalkooda aynan wax lacag ah siineyn wakaaladaha dowlada ama shirakada kale.
Iyaga oo uu hor kacayo safiirka mareykanka u fadhiyo Kenya Mr.Robert Godec ayay cadeyeen in kenyaanka ay xaq u leeyihiin in ay doortaan hogaamiyaasha ay ku qanacsanyihiin sidaas awgeedna ay xaqaasi si weyn u tixgelinayaan.
Bayaankan ayaa waxa sido kale saxiixay wakiilka midowga Yurub ee Kenya Stefano Dejak.
Hadalka ka soo yeeray safiiradan ayaa ku soo begmaya maalmo ka dib markii madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta uu ka digay faragelinta wadamaad shisheeye ay ku sameyn karaan natiijada doorshada guud ee la filayo in ay dalka ka dhacdo sanadka soo socdo.
← Hay’ada caafimadka ee WHO oo loogu baaqay in ay qeyb ka qaadato soo afjarida shaqa joojinta dhaqatiirta
Madaxweynaha oo madixii hore ee kaniisada Anglikan u soo magacaabay guddomiyaha EACC →